प्रचण्डले रुकुमेली जनतासमक्ष आत्मालोचना गरे, माफी मागे, आखिर प्रचण्डको गल्ती के हो ? – Khabar Patrika Np
प्रचण्डले रुकुमेली जनतासमक्ष आत्मालोचना गरे, माफी मागे, आखिर प्रचण्डको गल्ती के हो ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र २६, २०७७ समय: १७:४५:५४
अहिले के भन्न खोजिएको छ भने प्रचण्ड अब कमजोर भइसक्यो । अब प्रचण्डलाई जनताको साथ छैन । अब प्रचण्डले केही गर्न सक्दैन ।……अब प्रचण्डको त्यति तागत छैन भन्ने ठानेका छन् केही मान्छेहरुले ।
ती मान्छेहरूलाई भन्नका लागि मेरो पार्टी छ । मेरा नेता, कार्यकर्ता साथीहरु छन् । मसँग क्रान्तिकारी जनताको कहिल्यै नटुंगिने उर्जा, शक्ति छ र जनताको साथ छ भन्नका लागि चैत्र २४ गते रुकुममा जनआन्दोलन दिवस मनाउन आएको हुँ ।…. म यहाँबाट सरकारलाई, सिंहदरबारमा बसेर प्रतिगमन गर्न चाहनेलाई रुकुमेली जनताको वीचबाट खबरदारी गर्न आएको हुँ । म खबरदार भन्न चाहन्छु प्रतिक्रान्तिकारीहरुलाई ।
म वास्तवमा थोरै तपाईहरुसँग आत्मालोचना गर्न पनि आएको हुँ । मैले काठमाडौंका अरु पार्टीका नेताहरु देशी–विदेशी थुप्रै–थुप्रै मान्छेहरुसँग यसो गरे होला कि, त्यसो गरे होला कि….. मैले राष्ट्र र जनताको हितप्रति दायाँ–वायाँ त गरिनँ । गर्ने पनि छैन । ममाथि हजारौं, शहीद बेपत्ता, घाइते योद्धाहरुको बोझ मेरो टाउकोमा छ । म दायाँ–वायाँ सोच्नै सक्दिनँ ।
अन्त्यमा, फेरि एकपटक प्रचण्डले रुकुममा भनेको सम्झौं– ‘…. अहिले के भन्न खोजिएको छ भने प्रचण्ड अब कमजोर भइसक्यो, अब प्रचण्डलाई जनताको साथ छैन । अब प्रचण्डले केही गर्न सक्दैन…..।’
गान्धीले शायद ठीकै भनेका हुन्– आफैंले बाहेक मान्छेलाई कसैले हराउन सक्दैन….।